Daahfurkii Aakaadamiga Fanka iyo Cilmiga: 2014kii mise 2017kii. Qaybta Labaad! | Qaran News
Daahfurkii Aakaadamiga Fanka iyo Cilmiga: 2014kii mise 2017kii. Qaybta Labaad!
Writen by Qaran News | 10:55 pm 18th Jun, 2017
Iyada oo Akaadamiga Fanka iyo Cilmiga loo qabtay keliya munaasibad daahfur ah ayaa Wasiir Samsam Cabdi Aadan loo beddelay dhanka maaliyadda. Qormadan waxa aynu ku eegi doonnaa bilihii uu Wasaaradda Waxbarashada joogay Faarax Cilmi Geedoole.
Intaasi Waxa xigtay in Mudane Faarax Cilmi Geedoole loo magacaabay Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare 15kii Maarj 2015ka. Laba toddobaad ayay Samsam sii haysay xilka waxbarashada. Intii aanay xil-wareejintu dhicin dhawr jeer ayaan Wasiir Samsam kala xidhiidhay hawshii Akadamiga Fanka iyo Cilmiga, laakiin kama helin wax jawaab ah.
Wasiir Geedoole waxa aanu kulannay isaga oo xafiiskiisa dibadda ka jooga, gaahiga ayaa uu ka soo degay. Cabbaar ayaanu waxoogaa hadallo ah is-dhaafsannay, markii aan hawsha u furay waxa uu yidhi “Sheekadaas aan iska waraysanno, ee xafiiska iigu kaalay”. Miyuu gaadhiga ka degayaaba….. Halkaasuu qabtay.. Wuu baxay.. Safar buu galay… Ma joogo… Mar kale oo aan arkayna xafiiska ayaanu ku ballanay, kuma se arag. Waxa xigtay oo aan ku sagootiyay munaasibaddii xil-wareejinta ee ka dhacday Safari Hotel, halkaas oo uu xilka ku tirsaday Wasiir Cabdillaahi Ibraahin Habbane (Cabdillaahi Dheere).
Duudduub ahaan waxa uu Wasiir Geedoole xilka wareejiyay isaga oo aan far u qaadin taabbaqaadkii Akadamiga Fanka iyo Cilmiga. Ma garanayo halkii ay mareen $100,000 (boqol kun oo doollar) oo sannadkii 2015ka miisaaniyadda ugu jiray Akadamiga. Hanti-dhawrkii qaranku ma i maqlayaa? Bal lacagtaas baadhitaan ku sameeya? Ma abaarihii ayaa lagu daray? Ma bar-xisaabeed ayay inoogu jiraan?. Kollay xisaabta ifka mid kale ayaa ka dambaysa, haddii sifo weecsan loogu tagri-falay hantidaasna gole kale ayaa lagu xisaabinayaa.
Mar kale waxa aanu Prof Geedoole isku aragnay munaasibad ay dugsiga Quulle Aadan deeq ku wareejinayeen deeq adhi ah oo ay u garteendugsiga agoomaha Hargeysa. Taas oo qabsoontay 22kii Sebtember 2015ka ama maalintii ka horreysay ciidal-carafa. Sidii uu caanka ku ahaa ayuu yidhi “xafiiska iigu kaalay”. Xafiiskiisuba baabuurka ayuu ahaa, meel uu gelinka dambe ku qayili jiray haddaan mirqaanka wax ugu sheegi lahaana nin ka masuul ahaa ayuu ku yidhi “Walaal, marka aan qayilayo dadka ha ii soo deynnin”
Magacaabistii Madaxweyne Siilaanyo Ee Guddida Akadamiga Fanka iyo Cilmiga!
Maqaal aan sannadkii 2015ka ka qoray magacaabistii Madaxweyne Siilaanyo ee Guddida Akadamiga Fanka iyo Cilmiga iyo sidii uu Wasiir Geedoole uga gaabiyay shaqada Akadamiga ayaa u dhignaa sidan:
Waxay ahayd 21kii Maarj 2015ka markii Madaxweyne Siilaanyo magacaabay Guddida Akadamiga Fanka iyo Cilmiga. Waxyaabaha uu ku fashilmay Wasiir Geedoole waxa ka mid ah dhaqaajinta Akadamiga Fanka iyo Cilmiga. Waxaynu maanta (21ka Julay 2015ka) aragnaa in Madaxweyne Xasan Sheekh uu Muqdisho ka dhagax-dhigay Xaruntii Akadamiga Fanka iyo Cilmiga ee Soomaaliya oo ah dawlad burburtay? Sidee ayaanay Somaliland oo 25 sano nabad ahayd u yeelan weyday xaruntan? Door intee leeg ayuu Wasiir Geedoole dayaceeda ku leeyahay?
Sida ku caddayd digreeto Madaxweyne Siilaanyo soo saaray 21kii March 2015ka, waxa uu ku magacaabay 13 xubnood oo noqonaya guddiga maamulka Akadamiga Cilmiga iyo Fanka Jamhuuriyadda Somaliland, isagoo xubnahaas faray inay dhaqaajiyaan horumarinka cilmiga iyo fanka.
“Aniga oo tixraacaya qoraalka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee ujeeddadiisu tahay soo-jeedin magacaabidda xubnaha Akadamiga Cilmiga iyo Fanka. Haddaba, mudanayaal, waxaan idiin magacaabay in aad noqotaan xubnaha Akadamiga Cilmiga iyio Fanka Jamhuuriyadda Somaliland.
Sidaa darteed, waxaan idinka ajaynayaa in aad xil mug iyo miisaan leh iska saari doontaan hawlaha cilmiga iyo fanka Jamhuuriyadda Somaliland,” ayuu Madaxweynaha Somaliland ku yidhi digreetadiisa.
13-ka xubnood ee loo magacaabay hoggaaminta Akadamiga Cilmiga iyo Fanka Somaliland waxa guddoomiye u ah Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare Prof. Faarax Cilmi Maxamuud (Geedoolle), Guddoomiye-ku-xigeenna Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda marwo Samsam Cabdi Aadan, waxana xubno ka ah;
Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta Qaranka iyo Horumarinta Dr. Sacad Cali Shire,
Wasiirka Wasaaradda Degaanka iyo Horumarinta Reer Miyiga marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare,
Wasiir-ku-xigeenka Wasaaradda Qorshaynta Qaranka, Cabdikariim Axmed Mooge,
abwaan Maxamed Ibraahim Wasrame (Hadraawi),
Cali Xuseen Ismaaciil (Shoombe) oo dhowaan loo magacaabay Safiirka Somaliland ee Kenya,
Prof. Saleebaan Axmed Guuleed,
Axmed Ibraahim Cawaale,
Dr. Maxamed Warsame Ducaale,
Dr. Siciid Axmed Xasan iyo Dr.
Axmed Xuseen Ciise.
Magacaabista uu Madaxweyne Siilaanyo ku xulay Guddiga Akadamiga Fanka iyo Cilmiga waan soo dhaweynayaa. Waxa haboonnayd in la magacaabo sannadkii 2014ka, maadaama oo uu dhaqaalaha haayaddani ku jiray miisaaniyadda illaa sannadkii hore. Laakiin weli miyaynu aragnay Guddi hore oo tiradoodu dhan tahay saddex iyo toban?. Halkaa waxa ku jirta in la badiyay tirada, waxay qaadaysaa wakhti in la kulmiyo xubnaha ku magacaaban digreetada.
Qaar badan oo ka mid ah xubnahani ma aha kuwo aqoon u leh hawsha loo magacaabay ee horumarinta Fanka iyo Cilmiga marka laga reebo Abwaan Hadraawi, Axmed Ibraahin Cawaale, Xildhibaan Cabdiraxmaan Yuusuf Cartan iyo Samsam Cabdi Aadan.
Waxa ila habboonayd in Akadamiga Fanka iyo Cilmiga loo magacaabo xubno u madax-bannaan shaqada oo aan xil kale haynnin. Waxaynu ognahay in wasiirradu la daalaa-dhacayaan shaqada qaran, Guddoomiyayaasha Jaamacadahana waxa ku culus xilka ay hayaan. Xubin ka mid ah guddigani waa safiir fadhigiisu yahay dalka Kiiniya, oo ay adag tahay in uu ka shaqeeyo ama la shaqeeyo dad fadhigoodu Hargeysa yahay. Halkaa waxa ii muuqata in xaabo la saaray dad aan qaadi karin, taasina waxa ay cubba-dhawr ku tahay shaqada qaran ee loo igmaday dad aan haleel u haynnin. Mar aan la xidhiidhay xubno ka mid ah guddidan waxa ay iigu jawaabeen “Digreetadaasi waa ay jirtay. Laakiin meelna kuma aannu kulmin, cid isugu kaaya yeedhayna ma jirto”. Bal nasladdan iyo dalcaddan eega!
Guddidani waxa ay tusaale u yihiin guddiyada kumannaanka ah ee Siilaanyo dalka ku majara-habaabiyay. Maalin walba waa guddi, kuwanina waa guddi, kuwuu sicir-bararku waa guddi, kuwii tahriibku waa guddi…
La soco qaybta saddexaad insha Allah
Siciid Maxamuud Gahayr <siciidgahayr@gmail.com